नेपाल बैंक : कम्पनी विश्लेषण (बुधवार, १८ असार २०७६)
यस आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा रू. २ अर्ब २४ करोड नाफा कमाएको बैंकको वितरणयोग्य नाफा रू. १ अर्ब ६२ करोड १६ लाख ९६ हजार पुगेको छ । बैंकको चुक्तापूँजी रू. ९ अर्ब ८१ करोड ११ लाख ४८ हजार छ भने जगेडा कोष रू. १५ अर्ब ६१ करोड १० लाख ५४ हजार छ । प्रिमियमसहित चालू आर्थिक वर्षको शुरुआतमै एफपीओ जारी गरेको बैंकले यस वर्ष लगानीकर्ताको हात भने खाली बनाएको थियो । गत वैशाख २२ गते साधारणसभा सम्पन्न गरेको बैंकले लाभांशसम्बन्धी कुनै प्रस्ताव उल्लेख गरेको थिएन । चैत मसान्तसम्म प्रतिशेयर आम्दानी रू. ३० दशमलव ५२ रहेको बैंकको मंगलवारको शेयर कारोबारमा मूल्य रू. ३३७ कायम भएको छ ।
2019-07-03 - 104 view(s) - abhiyan